I-Induction Brazing Basics | Umatshini wokufudumeza ubushushu | izisombululo zokungenisa ubushushu
Iingxowa zeBrazing Basing
Izisiseko zeBrazing Basics zokudibanisa ubhedu, isilivere, ubhonkco, isinyithi kunye nensimbi engenasici, njl.
I-Induction Brazing isebenzisa ubushushu kunye nokuzalisa isinyithi ukujoyina isinyithi. Nje ukuba inyibilike, i-filler ihamba phakathi kwesinyithi esisondeleyo (iziqwenga zidityanisiwe) ngentshukumo ye-capillary. I-filler etyibilikayo inxibelelana nocingo olucekeceke lwesiseko sesinyithi ukwenza ubumbano olomeleleyo, oluqinisekileyo lokuvuza. Imithombo eyahlukeneyo yobushushu ingasetyenziselwa ukubamba: ukufakelwa kunye nokuchaswa kwezifudumezi, ii-oveni, iifanitshala, iitotshi, njl. Ukwenziwa kwe-brazing ye-induction kuchaphazela kuphela eyokuqala kwezi. Ukuba nesithuba esichanekileyo phakathi kwesiseko sesiseko kubalulekile. Isithuba esikhulu kakhulu sinokunciphisa amandla e-capillary kwaye sikhokelele kumalungu adibeneyo kunye ne-porosity. Ukwandiswa kobushushu kuthetha ukuba izikhewu kufuneka zibaliselwe isinyithi xa kubanjwa, hayi kwigumbi, kumaqondo obushushu. Isithuba esifanelekileyo siyi-0.05 mm-0.1 mm. Ngaphambi kokuba ubraze iBrazing ayinangxaki. Kodwa eminye imibuzo kufuneka iphandwe- kwaye iphendulwe-ukuze kuqinisekiswe ukujoyina ngempumelelo, nangokungabizi mali. Umzekelo: Zifanele kangakanani iziseko zesinyithi zokubhrasha; loluphi olona loyilo lubalaseleyo lwekhoyili ngexesha elithile kunye neemfuno zomgangatho; ingaba ibhrashi kufuneka yenziwe ngesandla okanye ngokuzenzekelayo?
Kwi-DAWEI Induction siphendula ezi kunye namanye amanqaku aphambili ngaphambi kokucebisa ngesisombululo sobhedu. Ukugxila ekubhobhozeni Isiseko sesinyithi kufuneka sihlale sombathiswe ngesinyibilikisi esaziwa njenge-flux ngaphambi kokuba zibethwe. I-Flux icoca isiseko sesinyithi, ithintela i-oxidation entsha, kwaye imanzisa indawo yokubhangisa ngaphambi kokubhrawuza. Kubalulekile ukufaka umgama ngokwaneleyo; incinci kakhulu kwaye ukuhamba kuya kuba
Igcwele i-oxides kwaye ilahlekelwe sisakhono sayo sokukhusela isiseko sesinyithi. I-Flux ayisoloko ifuneka. I-phosphorous-bearing filler
Ingasetyenziselwa ukuloba ii-alloys zethusi, ubhedu kunye nobhedu. I-Flux-free brazing nayo inokwenzeka nge-atmospheres esebenzayo kunye ne-vacuum, kodwa ubhedu kufuneka lwenziwe kwigumbi lomoya elilawulwayo. I-Flux kufuneka isuswe kwindawo leyo xa ithe yagcwaliswa ngentsimbi. Iindlela ezahlukeneyo zokususa zisetyenzisiwe, ezona zixhaphakileyo kukucinywa kwamanzi, ukukhethwa kunye nokucocwa kweengcingo.
iindidi FAQ tags ibhanti ephezulu, ukugqithisa ukukhangela, Iingxowa zeBrazing Basing, i-heating brazing heater, umgaqo wokubumba, ngcamango yebhere